एकै वर्ष विदेश पढ्न जान्छन् ६३ हजार अस्ट्रेलिया जानेको संख्या सर्वाधिक, दोस्रोमा जापान | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १०:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या ६३ हजार २ सय ५९ पुगको छ । सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्दैगएको दाबी गरेतापनि आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को तुलानमा गत वर्ष ५ हजार विद्यार्थीको संख्या बढेको हो ।
अष्ट्रेलियामा अध्ययनसंँगै रोजगारीको अवसर पाउने भएपछि विद्यार्थीको संख्या बढेको शाखाले जनाएको छ । अष्ट्रेलियामा तुलनात्मक रुपमा सजिलै भिषा पाउने भएपछि त्यहाँ जानेको संख्या बढ्न थालेको शाखा प्रमुख महेश्वर शर्माले बताउनुभयो ।
शर्माका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष अर्थात असार मसान्तसम्म करिब ६३ मुलुक अध्ययन गर्न जान विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । उहाँका अनुसार विदेश अध्ययन गर्न एनओसी लिने दोस्रो मुलुक जापान हो । गएको आर्थिक वर्षमा ८ हजार ५ सय २३ जना विद्यार्थीले जापानको लागि एनओसी लिएका छन् । त्यस्तै कोरिया, अमेरिका,क्यानडा,बेलायत, स्वीजरल्याण्ड, इटाली,चीन,थाइल्याण्ड,जर्मन, फ्रान्स लगायत मुलुकका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो रहेको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिका र बेलायतले भिषा प्रणालीमा कडाइ गरेपछि त्यहाँ विद्यार्थीको जाने क्रम घट्दै गएको छ । भारतका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने अधिकांश विद्यार्थीले एनओसी नलिने भएकोले भारत जाने विद्यार्थीको संख्या एकिन गर्न नसकिएको शर्माले बताउनुभयो । उहाले भन्न्ुभयो–मेडिकल, इन्जिनियरिङ र पिएचडी गर्न जाने केही विद्यार्थीले मात्र एनओसी लिने गरेका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङकअनुसार गत आवमा अमेरिका लागि १ हजार ४ सय ९१ र बेलायतका लागि ३ सय ५० जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७०–०७१ मा २८ हजार २५, ०७१–०७२मा ३० हजार ६ सय ९६, ०७२–०७३मा ३२ हजार ४ सय ८९, ०७३–०७४मा ५१ हजार ६ सय ५९ र ०७४–०७५मा ५८ हजार ७ सय ५८ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए ।
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिगः छोटो तयारी, ठूलो सपना !
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुई प्रतियोगितामा उपविजेता बनेर फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली साता…
बाटोमा हिड्दै गर्दा भेटिएको पैसाले यस्तो कुराको संकेत गर्छ
काठमाडौँ । के तपाईले बाटोमा हिड्दै गर्दा कहिल्यै पैसा भेटाउनुभएको छ ? यदि भेटाउनुभएको भए टिप्नु पनि भएको होला…
गृहमन्त्रीलाई आफ्नै छोराबाट खतरा
काठमाडौं । आफू निकट प्रहरी अधिकारीलाई राम्रो स्थान दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समय नै नपुगी प्रहरी प्रमुखको हेरफेर…
यी हुन् भारतीय दूतावासको कार्यालयमा बम पड्काउने व्यक्ति
विराटनग । विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालयमा भएको बम विष्फोटमा संलग्न रहेको आशंकामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट…
कारबाहीमा पर्दै मेडिकल संस्था, निर्देशिकाविपरीत अस्पतालहरू
काठमाडौं । स्वास्थ्य निर्देशिकाविपरीत मनोमानी ढंगले निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थाले विज्ञापन गर्दै आएका छन् ।
श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर…
रेलको विषयमा अहिलेसम्म ‘कुरामात्रै’ : न केरुङबाट आउने टुङ्गो छ न रक्सौलबाट
काठमाडौँ । चीन र भारतले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग बनाउन चाहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारी ब्यूरोक्रेसी होस्…
साला फेसबुक !! 166 views
बच्चासहित दम्पतीले त्रिशूलीमा हाम फाले, श्रीमतीको मृत्यु 13 views